Ngokungafani emazweni amaningi emhlabeni, isibonakaliso isimo United States of America kukabili, like uhlamvu. Lolu phawu yezwe ubizwa nangokuthi Omkhulu Seal (Omkhulu Seal). Isetshenziselwa lokungibikela kuphela eminye yemibhalo kugunyazwe uhulumeni walesi ngamandla amakhulu, olufana nekheli lamengameli, kanye nezivumelwano ngamazwe. UNobhala woMbuso-United States of America unesibopho isitoreji ukuphrinta. Kodwa yayo ukucashela umphakathi jikelele: ubone okwangempela ezibalulekile kungaba ubani e-Washington, ehholo embukisweni uMnyango State. US elingenamikhono izingalo enesixwayiso kwi obverse ka aDumileko. Yini uvezwa phezu reverse owasungula lezi izimpawu wekuba sive, kanye nenombolo magic 13, okuyinto liphindwe izikhathi eziningana e isibonakaliso futhi ifulege yezwe, bheka lesi sihloko.
History of the United States uwuphawu
Ngosuku olufanayo, lapho 4 Julayi 1776 ezamenyezelwa kutimela isimo esisha, kuze Continental Congress wawa umsebenzi ukuthuthukisa ifulege lesizwe, eqinisekisa ubukhosi. Ngokuthakazelisayo, abadali umqondo aDumileko kwakungafanele abaculi, kodwa kude abantu heraldry. Kodwa lezi zibalo oluvelele, liye lenza umzamo omkhulu ukuze ukukhululwa kwe-nantathu uthi kusukela ngaphansi ngobulukhuni-United Kingdom. amalungu amathathu e-Continental Congress - Dzhon Adams, uBenjamin Franklin noTomase Jefferson - baye basungula imiklamo yabo siqu. Bazama zintambo enguNobhala Congress Charles Thomson. Kodwa kwathatha iminyaka eyisithupha ukubandakanywa umculi kanye heraldry Pierre Eugene du Simitera ukuxhuma ndawonye onke amaphrojekthi kanye ukuhumusha ephepheni uphawu isimo.
Zonke abalobi ezintathu umqondo aDumileko wahosha ugqozi yayo esebenzisa iBhayibheli. Ikakhulukazi, uBenjamin Franklin wahosha ngokufana okukhona phakathi ukukhululwa abantu American ejokeni umlando ngokufuduka kwezilwandle yamaJuda Egypt. Itshwayo izingalo United States kule nguqulo ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele isiqubulo esithi "Ukuvukela kobushiqela - e intando kaNkulunkulu." Thomas Jefferson wabona oqotsheni ubukhosi kubantwana bakwa-Israyeli, eholwa uMose ukuba iZwe Lesithembiso. On the reverse kwakufanele abonise ezimbili umholi Saxon Hengist futhi Horsa, ogama izinhlobo zohulumeni yamukelwa baseMelika. mhlawumbe Okuhlukile kaJohane. Adams kwaba esikisela ucansi kakhulu. I obverse agabise a nqunu Hercules kokuncika club, kube yibo - kancane agqoke Ubuhle isimemezelo endleleni ekhuphuka, futhi ubuvila, ukuba nihlale phansi otshanini phakathi izimbali.
Kodwa noma angazama kangakanani lengalo, Pierre Simiter ngalokwakhako Kuvisisa kwetfula imibono ngendlela heraldic izimpawu abalobi aDumileko, nomklamo walo sinqatshiwe Congress. In the yesibili, i-Committee on ukuthuthukiswa lwezimpawu entsha yezwe langena Francis uHopkinson. Uvele usezibophezele kuthuthukiswe ngaphambi elingenamikhono izingalo New Jersey, futhi waqala ku isibonakaliso isimo. Kuyinto ngiyabonga kuye ifulege futhi uhlanganiswa nokuzala United States kuhlobisa nantathu imivimbo obomvu nomhlophe kanye netinombolo izinkanyezi. Hopkinson futhi owasungula umqondo wokunyathelisa reverse: i mbhoshongo sidle futhi iso ngokongamela. Nokho, obverse, wakhe ubuhanjelwe nonkulunkulukazi ezimbili nge legatsha omnqumo imicibisholo, ayikuthandi Congress, ngakho ikomidi lwesithathu yasungulwa.
On the iphepha kwaba ukuheha abasha, umlutha heraldry ummeli uWilliam Barton. kamuva nje kwezinsuku ezinhlanu Waletha kuya Umklamo aDumileko Congress. I obverse agabise ukhozi nge ukusabalala amaphiko, reverse wahlala cishe iyafana ke wadonsela ekomidini kuqala. Congress Loti nabaka Abram baxabana kakhulu nge isibonakaliso ezihlongozwayo, kodwa isikhathi rework kakade wayengekho: kwakudingekile ukuze siqinisekise imibhalo isimo kubalulekile ngaphansi inkontileka ne-UK exchange of iziboshwa. Ngakho-ke, indaba emfushane samukelwa nini njengophawu isisekelo, futhi uCharles Thompson eyalwa ukuba uthuthukise. Lokhu uNobhala abanamakhono weCongress futhi wadala wekugcina - isibonakaliso-United States, isithombe okuyinto ubona zonke encyclopedia. Thompson wakucabangela yonke imibono ezithakazelisayo Amakomidi ezintathu. Waligcina inombolo magic 13 - inani uthi abaye baba nucleus eyisisekelo isimo esisha. Babephinde babizwe wayegcina legatsha omnqumo imicibisholo - izimpawu zokuthula, kodwa futhi ilungele impi. Kuphela asizange unkulunkulukazi, futhi izimpiko okhozi. Lesi sakhiwo sivunyiwe Juni 20, 1782, kwathi ngo-September aDumileko wabekwa idokhumenti ugunyaza Washington ukushintshashintsha iziboshwa.
Ngakho yini inyoni phezu elingenamikhono izingalo-United States?
Barton wanquma ukuthi ukhozi - uphawu kuvamile heraldic. Wayefuna inyoni kweqiniso American wayechazwa kuphawu wezwe. Kwaba njalo ukhozi luhlasela (Igama Lesi'Latin Haliaeetus leucocephalus). Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi lolu hlobo raptors atholakala kuphela emazweni aseMelika, kodwa Manje sekuyaziwa ukuthi imisebe nabameleli bayo bazohlala eRussia, ku iBering Island. Ngokuthakazelisayo, inyoni, okuyinto manje ihlobisa elingenamikhono izingalo-United States, kungaba ... turkey. It ahlinzekwa njengesifanekiselo yezwe B. Franklin. Futhi zonke ngoba ngokuvamile turkeys zihlaselwa begqoke iyunifomu obomvu we British Grenadiers. Nokho, iningi labantu baseMelika wanquma ukuthi lezi zinyoni kabanzi izimpawu ezibhekwa ekuziqhayiseni nobuwula, ngakho ukhethe Orlan.
Inombolo "13" itholakala aDumileko kokubili obverse kube yibo. By the way, ohlangothini emuva kwalesi uwuphawu wekuba sive kungaba ufisa cabanga sibambe uMthethosivivinywa 1 dollar. Kube kuboniswa i mbhoshongo sidle emabhuloki nantathu Providence iso. Nokho, Thompson ungeze Isiqubulo sinazo 13 letters: «Annuit Coeptis», okusho "UNkulunkulu sisihle nokuzibophezela kwethu." Okwesibili Latin Isiqubulo - Novus Ordo Seclorum - elihunyushwe ngokuthi "New Order of the Ages." Ezansi usuku - 1776. Lo nyaka, efanekisela ekuqaleni American wombuso. ukuphrinta Avers - eqinisweni, elingenamikhono izingalo USA - futhi igcwele inombolo "13". Uqhwaku lwenhlanzi okuthiwa i ukhozi iribhoni okudweba nombhalo othi «E Pluribus Unum» (ngenombolo magic izinhlamvu). Red futhi white stripes kwi isihlangu, izinkanyezi efwini phezu kwekhanda nyoni, imicibisholo emlenzeni ngakwesokunxele, amacembe kanye iminqumo ku igatsha ngakwesokudla - konke ubonisa futhi igubha uthi 13 zokuqala. Umfanekiso imibala in the elingenamikhono izingalo kuyinto bendabuko: White - ubumsulwa, obomvu - isibindi nangamandla, blue - uphawu ephapheme.